KAOMININA AMBANIVOHITRA MANTALY : Notoloran’ ny depiote Assimo Bruno fitaovana
Asa fa tsy kabary mandany gasy, hoy ny fiteny any amin’ny tapany avaratry ny Nosy. 18 février 2021
Ny alatsinainy teo notoloran’ny solombavambahoaka voadidy tao amin’ ny distrikan’Ambilobe fitaovana maro samihafa izay nahitana solosaina miaraka amin’ny « imprimante », « onduleur » ary seza plastika maromaro ny kaominina ambanivohitra Mantaly mba ho fanampiana ireo tompon’andraikitra eo anivon’izany kaominina amin’ny adidy sy andraikitra sahaniny.
Notolorana « panneaux solaires » ihany koa ny kaominina satria ilaina herinaratra ny fampiasana solosaina sy « imprimante ». Nisaotra ny depiote Assimo Bruno ny Ben’ny tanànan’ny kaominina Mantaly sy ny ekipany tamin’ny nanolorana ireto fitaovana ireto ary nanome toky izy ireo fa hampiasa izany am-pahendrena ary hoentina hatrany hanasoavana ny kaominina sy ny vahoaka ao aminy.
Nahazo ny anjarany ihany koa ny« Asa »
Ankoatra ny kaominina dia nahazo ny anjarany ihany koa ny fikambanana antsoina hoe « Asa » tao Mantaly. Notoloran’ny depiote Assimo Bruno fitaovana entina hanatsarana ny sosialim-bahoaka toy ny siny, lovia, vilany, sns, ary fitaovana hahafahana manatanteraka ny asa fambolena toy ny « râteaux », angady, sns ity fikambanana ity. Fikambanana izay vao naorina tsy ela akory nefa manana ny maha izy azy satria ahitana azy ireo kaominina miisa 17 mandrafitra ny distrikan’Ambilobe.
Voaantso teny amin’ny biraon’ny Polisy tetsy Tsaralalàna indray CLEMENCE RAHARINIRINA (2008) 5 mars 2021 Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (909) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (205) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (110) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (105) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (93) 2 mars 2021